Imibala epeyintwe ngeKhitshi engama-43 yeeKhitshi -Imibono yeMibala eKhitshini eDumileyo - Ezona Khitshi Zintle Zango-2017
Imibala epeyintwe ngeKhitshi engama-43 yeeKhitshi -Imibono yeMibala eKhitshini eDumileyo
Ukongeza Umbala yeyona ndlela yokutshintsha izinto ekhitshini- akukho ukulungiswa, akukho lwakhiwo, ipeyinti kunye nebrashi. Nokuba uyi igreyi uhlobo lomntu okanye umntu othanda ipapa yayo nantoni na edlamkileyo, siqokelele ngaphezulu kweekhitshi ezingama-30 ezinemibala emihle yepeyinti ukukunceda ukuba uqalise. Bethelela eyakho iikhabhathi nge iblues eqaqambileyo kwaye ezibomvu , okanye umhlaba umhlaba omkhulu ngeingwevu ethomalalisayookanye luhlaza ... Nokuba ukhetha owuphi umbala-okanye ukuba ukhubekile ngokupheleleyo-sinemibono emitsha yepeyinti yasekhitshini, imizekelo yoyilo, kunye neengcebiso zokuthenga ezikukhokelayo. Uninzi lomntu omhlophe wepeyinti? Intloko apha yee-shades zethu esizithandayo.
🏡 Uyakuthanda ukufumana iindlela ezintsha zoyilo. Nathi senza njalo. Masabelana ngezona zibalaseleyo kubo.
Jonga igalari 43Iifoto UJames Merrell 1Kaninzi '43Isityalo seqanda
Kule khitshi yaseLondon, uyilo uRita Konig wakhetha iikhabhathi ezivela kumgca wakhe onemibala yesiNgesi e-Plain ngomthunzi omfusa obizwa ngokuba yi-Burnt Toast. I-Calacatta Viola, i-marble-streaked marble, ivelisa isitshalo seqanda se-inki.
Thenga umthunzi ofanayo wekhabhathi ngezantsi:
THENGA NGOKU Iikhabhathi ezitshisiweyo zikaRita Konig
UDavid Tsay MbiniKaninzi '43Umbala oluhlaza
Ukudityaniswa okuluhlaza kuluhlaza ngaphandle komthungo phakathi kwekhitshi kunye nendawo yokutyela yale 'ijungalow,' nguJustina Blakeney, ngakumbi xa ubhangqiwe kunye nomqolo wethayile kaMoroccan kunye ne-ombre dining stools kwigumbi lokuhlala.
Thenga i-lacquer efanayo apha ngezantsi:
THENGA NGOKU I-Farrow kunye neBhola yokupheka i-Apple eluhlaza, $ 110
Iikhitshi zeVV 3Kaninzi '43UMarigold
Kule I-DeVol Ikhitshi, ipeyinti efudumeleyo yemarigold isekwe ziikhabhathi ezipholileyo ezingwevu. Iithayile zomgangatho zithetha kwiithoni ezingwevu ngelixa izixhobo zegolide zigcwalisa umbala omthubi ngokudibeneyo. Ukuba uziva ngokufanayo, khetha ipeyinti etyheli ecocekileyo kwaye eqaqambileyo kodwa isityebi ngokwaneleyo ukuba shushu.
Thenga umthunzi ofanayo wepende etyheli apha ngezantsi:
THENGA NGOKU Farrow kunye neBhola Babouche inombolo 223, $ 110
UDouglas Freidman 4Kaninzi '43Ipesika yeLacquer
Oku Ikhitshi lokubonisa ngu-Michelle Nussbaumer akoyiki ukudlala ngombala. I-pink blush / ipesika kunye neekhabhathi zangaphakathi ezinamanzi amdaka ziyabonakalisa, oko kuthetha ukuba zenza isithuba siziva sikhulu (njengesipili esiliqili, kodwa sinemibala!).
Thenga i-lacquer efanayo yokugqiba apha ngezantsi:
imibono yokuhombisa itafile yomntwana
THENGA NGOKU Iipeyinti ezintle zaseYurophu Hollandac Brilliant, $ 155
Le khitshi yahlukile kodwa ayinasiphelo, iyathandeka kodwa isisiseko. I-lavender swirls yepeyinti kwi-buttercream backdrop incedisa i-chandelier eluhlaza okwesibhakabhaka, nayo. Emva koko iikhabhathi zeklasikhi, ezingathathi hlangothi kunye nesiqithi somhlaba.
Thenga umthunzi ofanayo wepeyinti emfusa apha ngezantsi:
THENGA NGOKU I-Glidden Violet Shimmer, iidola ezingama-23
UMIKHAIL LOSKUTOV 6Kaninzi '43ICobalt Luhlaza
Kwindlu yakhe yaseBrooklyn, IiCrosby Studios Umyili uHarry Nuriev umgubo wawugquma umphezulu ngombala oluhlaza cobalt ukugqiba ngokuqinileyo, okuzinzileyo.
Thenga umthunzi ofanayo wepeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka apha ngezantsi:
THENGA NGOKU I-Behr emnyama yeCobalt Blue, $ 16
Uyilo lukaHeidi Caillier 7Kaninzi '43Umkhosi wamanzi omnyama
Eyilwe ngu UHeidi Caillier , le khitshi yinto entle enesimo sokubulela ngombala we-inky, umthunzi wemvakalelo wobumnyama obumnyama. Izinto zokubala ezenziwe ngomthi kunye nomqolo obuyela umva zigcina indawo ishushu kwaye ingaqhelekanga ngelixa ipeyinti enzulu, ephantse yamnyama yenza umoya osondeleyo nococekileyo. Ngokukhanya okuthile, inokubonakala iluhlaza okwesibhakabhaka ngokupheleleyo, ngelixa kwabanye, ijongeka ngathi imnyama.
THENGA NGOKU I-Farrow kunye neBhola yeStiffkey eBlue, $ 110
UDouglas Freidman 8Kaninzi '43Ngqombela
Ngaba uziva unomdla? Thatha umkhondo kwi eli khitshi. Umyili wezinto zangaphakathi uMichelle Nussbaumer ukhethe umbala ofudumeleyo wombala kwaye upakisha ubuninzi bezinto ezinobutyebi kwisithuba esincinci ukuze uzive ungacacanga. I-anchor ebomvu izisa ukuziva okupheleleyo kunye nokugcwala kwigumbi.
THENGA NGOKU Farrow kunye neBhola Incarnadine, $ 110
I-Arent kunye nePyke 9Kaninzi '43Luhlaza lwaselwandle
I-inky, ulwandle oluhlaza okwesibhakabhaka iyakucoca ikhitshi kwindawo evulekileyo kwaye izive isesikweni ngakumbi kunombala okhanyayo ngaphandle kokuba ube nomoya kwaye ube mnyama mnyama. Siyayithanda nembono yokupeyinta iikhabhathi zangaphakathi umbala ohambelana nesiqwengana segumbi, njengekhabhinethi yeorenji eyilwe I-Arent kunye nePyke ukutshatisa ikhaphethi.
THENGA NGOKU Farrow kunye neBhola De Nimes, $ 110
UNicole Franzen 10Kaninzi '43Ikorale
Eli khitshi lipinki lifana nokuba seholideyini unyaka wonke. Ngezinto ze-rattan kunye ne-bamboo kunye nengubo entsha yepeyinti epinki evuyayo, iyinto ethandabuzekayo, inyusayo, kwaye iyodwa ngaphandle kokuba ingaphezulu kakhulu.
Imihombiso elula ye-diy halloween
Thenga umthunzi ofanayo wepende epinki apha ngezantsi:
THENGA NGOKU I-Glidden Coral Silk, i-22 yeedola
2LG Studio Shumi elinanyeKaninzi '43Luhlaza sana
Kweli khitshi lenziwe ngu 2LG Studio , iikhabhathi ziyamthobisa umntana luhlaza. Isetyhula yekhabinethi eguqulweyo yongeza kubuntu obunobuntu, nobumnandi.
THENGA NGOKU I-Glidden Blue Age yobudala, i- $ 17
UDanielle Colding Interiors 12Kaninzi '43Mthubi-mhlophe oPhezulu
Ukuba ufuna isitatimenti esikhazimla kakhulu ekhitshini lakho kodwa ungafuni ukupeyinta igumbi lonke, khetha i-backsplash ebengezelelweyo eneflakhasi okanye iglasi epeyintwe ngasemva, njengoko kubonwe kweli khitshi ngu UDanielle Colding Uyilo . Ipop etyheli ayisoze isilele ukonwabisa igumbi.
UFrank omangalisayo 13Kaninzi '43Matte Mnyama
Akukho nto yesini ngaphezu komnyama omnyama xa kuziwa kwimibala yepeyinti ekhitshini. Lindela, oko kukuthi, xa ugubungela ezantsi kweekhabhathi eziphezulu kwinto ebonakalayo yegolide.
Thenga umthunzi ofanayo wepeyinti emnyama apha ngezantsi:
THENGA NGOKU IGlidden Onyx emnyama, $ 22
UMFANEKISO: Alexandra Ribar; Uyilo: uLeanne Ford Interiors 14Kaninzi '43Mthubi Mthubi
Qaphela kule ndawo yenzelwe ngu ULeanne Ford Interiors kwaye upeyinte ikhitshi lakho ngombala oshushu ongacacanga, njenge bhotolo yomthubi. Emva koko beka indawo yombhoxo kunye neepops zekorale kwi-anchor entsha, enesibindi. Isigubhu esikhulu esinegolide emhlophe kunye negolide sithetha ngombala wepeyinti, nawo. Ubuthathaka kwaye uyonwabisa.
THENGA NGOKU I-Farrow kunye neBhola yePale Hound, i- $ 100
UMFANEKISO: UMateyu Williams; Uyilo: Studio DB Shumi elinantlanuKaninzi '43Umthombo oluhlaza
Endaweni yokupeyinta zonke iikhabhathi okanye iindonga, zama ngombala kudonga lwengxelo. Le pop eluhlaza yobulumko ekhitshini eyenzelwe ngu Isitudiyo DB yongeza isixa esifanelekileyo sobuntu. Iishelufa zeglasi eziluhlaza kunye nesitya esikhulu esiluhlaza sibopha umbala ongalindelekanga.
Thenga umthunzi ofanayo wepeyinti eluhlaza ngezantsi:
THENGA NGOKU I-Glidden yoLwandle oluGlasi oluLuhlaza, $ 23
UFrancesco Lagnese 16Kaninzi '43Iwayini ebomvu
Yiya ngobuhle obunombala obomvu oqaqambileyo okhumbuza iwayini. Umbala oqinileyo, opheleleyo wongeza ubunzulu obuninzi kunye nobukhazikhazi. Ubungqina? Eli khitshi likaNick Olsen, apho iithayile zejometri zimpompoza izinto ukuya kwinqanaba elilandelayo.
Thenga umthunzi ofanayo wepende ebomvu ngezantsi:
indlu encinci yanamhlanje ekhethiweyo
THENGA NGOKU Farrow kunye neBhola Brinjal, $ 110
UMFANEKISO: UDustin Askland; UYILO: U-Elizabeth Roberts 17Kaninzi '43Ikrimu
Ukuba umhlophe uziva ubuthathaka kakhulu kuwe, khetha umthunzi ococekileyo. Kuya kuhlala kukhanya kwaye kukhanya, kodwa i-undertones efudumeleyo iya kunceda ikhitshi lakho liziva limema ngakumbi. Siyayithanda indlela ethambisa ngayo izinto zekhitshi eziyilwe ngu Uyilo luka-Elizabeth Roberts kunye noYilo .
Thenga umthunzi ofanayo wepeyinti engezantsi:
THENGA NGOKU Farrow kunye neBhola iWimborne White, $ 110
UNicole Franzen 18Kaninzi '43Ipinki eBlush
Ipinki ekhanyayo, ethambileyo ebonelela ngokuthinta nje i-oomph ijongeka intle ngokumangalisayo xa idityaniswe namaqhekeza anamhlanje, alungelelanisiweyo, ejiyometri. Kweli khitshi lenziwe ngu Abaqulunqi be-GRT , imigca yale mihla kunye nephalethi yeetoni ziziva zintsha kwaye zangoku ngelixa umbala wepinki uzenza zivuleke kwaye zikhanyise.
THENGA NGOKU Farrow kunye neBhola Middleton Pink, $ 110
I-Arent kunye nePyke 19Kaninzi '43Amagqabi eGolide
Akukho nto ifana nesinyithi yokwenza ukuba ngaphakathi kwakho kuphume. Khetha ukugqitywa kwegolide ebhrashiweyo kwiikhabhathi zasekhitshini kwaye uzise ngakumbi ezantsi kwizinto zomhlaba ezinje ngejute ukuze uqiniseke ukuba ayibengezeli kakhulu, njengakule khitshi yenzelwe iArent & Pyke.
Thenga umthunzi ofanayo wepeyinti yegolide apha ngezantsi:
THENGA NGOKU I-PPG egolide egolide, $ 48
Uyilo lukaRegan Baker Amashumi amabiniKaninzi '43Luhlaza okwesibhakabhaka
Yenza iipeyinti iikhabhathi ezisezantsi isibhakabhaka esibambe amehlo kwaye emva koko uthambise izinto kunye nethayile yepistachio ekhanyayo yeendonga, njengoyilo URegan Baker wenze kweli khitshi.
THENGA NGOKU UFarrow kunye neBhola St Giles Blue, $ 110
Iikhowudi zeVV amashumi amabini ananyeKaninzi '43Ukukhanya Taupe
I-beige yesanti igcina izinto zingathathi hlangothi kodwa ime kancinci ngaphezulu kokhilimu okanye grey ekhanyayo. Simba ngenene iikhabhathi zokhuni ezimnyama kunye ezingwevu kule khitshi ye-VOL, nayo. Iitoni ezahlukeneyo (kunye nokudityaniswa) zongeza umdla kwindawo yokungathathi hlangothi.
THENGA NGOKU Ubuncinci beBhola kunye neBhola, $ 110
UCatherine Kwong Uyilo 22Kaninzi '43Pewter
Eyilwe ngu UCatherine Kwong , le khitshi yiclassic yangoku eya kuguga kamnandi. Iikhabhathi zentsimbi ezingwevu zahluke nje ekuchukumiseni isiqithi esimnyama se-navy-grey yasekhitshini kunye nophahla lwekhrimu ngokugqibeleleyo.
THENGA NGOKU I-Farrow kunye neBhola eLulworth eBlue, $ 110
Iikhowudi zeVV 2. 3Kaninzi '43IFlamingo Pink
Awukwazi ukwenza isigqibo ngombala omnye wepende? I-deVOL Kitchens igumbi elitsha lokubonisa lingqina ukuba awunyanzelekanga. Khetha umbala omnye kwiindonga kunye nomnye kwiikhabhinethi ezisezantsi uze usebenzise i-backsplash edibanisa zombini. Emva koko peyinta ukusikwa kweekhabhathi eziphezulu into emnandi.
THENGA NGOKU UBenjamin Moore Pink Starburst, $ 43
UDanielle Colding Interiors 24Kaninzi '43Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka
Akunyanzelekanga ukuba ugqume ikhitshi lonke ngombala oqaqambileyo ukongeza ubuntu obuncinci. Xa indawo inqongophele, chonga udonga lwekona oluncinci ngombala wakho we-aksenti. Apha, umyili wezangaphakathi UDanielle Colding Wongeze udonga oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomfanekiso oqingqiweyo kodwa wagcina yonke into ikhazimla kwaye imhlophe.
THENGA NGOKU I-Farrow kunye neBhola iklabishi emhlophe, $ 110
Iikhikhini zeDVV 25Kaninzi '43Ngwevu Luhlaza
Kukhanya ngokwaneleyo ukuba kusebenze ngokungathathi hlangothi, ngakumbi ukuba ukhetha umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ongaphantsi kwegrey. Imiqadi yeenkuni evulekileyo kunye nezihlalo zendalo ezikhanyayo kule khitshi ye-VOL iyenza ithambe, imeme indawo.
THENGA NGOKU IPistachio yeGlidden, $ 23
UJONATHAN HOKKLO 26Kaninzi '43Lilac
Ukuxubana phakathi kweekhabhathi ze-lilac kunye ne-orenji yamarigold kule khitshi yomtsalane ngoyilo uPenelope Agasti kungqina ukuba izichasi ziyatsala. I-backsplash emnandi ye-terrazzo idibanisa zombini le nto ingenamthungo.
Uyilo lokujonga umhlaba ngasemva
THENGA NGOKU Farrow kunye neBhola Calluna, $ 110
Isitudiyo soYilo saseRomanek 27Kaninzi '43Mhlophe qwa
Akukho nto iphosakeleyo ngekhitshi emhlophe. Olu hlobo loyilo, njengoko lubhalwe ngu Isitudiyo soYilo saseRomanek Apha, ilungiselelwe ngokufanelekileyo kwigumbi apho ucoceko lubalulekile. Yifudumeze nje ngokukhanya okuthe kratya kobhedu kunye nokugqitywa kweenkuni ezimhlophe, kwaye wazise umahluko othe qwa kunye nonyango lwefestile emnyama kunye nomsebenzi wobugcisa.
Thenga ipeyinti emhlophe efanayo apha ngezantsi:
THENGA NGOKU Umtya kaBhenjamin Moore Chantilly, $ 43
Iikhonkco zeVOL 28Kaninzi '43Usana oluPinki
Le khitshi ye-deVOL ephefumlelweyo ye-Retro ngumdibaniso omnandi woyilo lwesiNgesi lwakudala kunye nokusebenza okwangoku. Ikhabhinethi yeglasi eyenziwe ngokwezifiso ukuba ilingane ngqo kwikona kwaye ijongeka intle ngombala opinki wosana kunye neKelly green backsplash.
THENGA NGOKU UFarrow kunye neBhola uCinder Rose, $ 110
U-Hecker Guthrie 29Kaninzi '43Ipeyinti Mint eluhlaza
Itafile ye-bistro ekhitshini inomdla ngakumbi kunesiqithi esiqhelekileyo. Kwaye kuhlaziye ngakumbi xa upeyinta izitulo zebar yakho i-crisp mint green hue kwaye uxhome isibane sethuba lobhedu ngaphezulu.
THENGA NGOKU UkuKhanya okuKhanyayo okuKhanyayo okuluGreen, $ 35
Iikhowudi zeVV 30Kaninzi '43Ubusuku obuBlue
Ukuba umbala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe ubonakala njengonxweme kakhulu kuwe, khetha ubunzulu obunzulu bobusuku obunombala oluhlaza okanye umkhosi omnyama waselwandle omnyama. Ezi toni zityebileyo ziya kuwusawula wonke umhlaba kwaye ujonge ukufudumeza ngobuninzi ngomthi okhutshiweyo, imiqadi eveziweyo, imigangatho yamatye, izixhobo zobhedu kunye nezinto zokupheka zethusi.
THENGA NGOKU I-Farrow kunye neBhola iHague yeBlue, i-110 yeedola
OkulandelayoIikhikhi ezili-15 zeRustic Unako ukukhupha ngokupheleleyo Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiUHadley Mendelsohn Umhleli oMkhulu UHadley Mendelsohn ngumhleli ophakamileyo weNdlu, kwaye xa engaxakekanga ethathela ingqalelo kuzo zonke izinto ezinxulumene nokuhonjiswa, unokumfumana ethengisa iivenkile zokuvuna, efunda, okanye ekhubeka kuba mhlawumbi waphulukana neiglasi zakhe kwakhona.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
Eyona ndlela yokuququzelela ikhabethe
izimvo zokugcina igumbi labantwana
isipili esongezelelweyo esikhulu